» हेटौँडाकी लोक गायिका अर्याल भन्छिन्–‘पारिवारिक सहयोग भयो भने गीत गाउन गाह्रो छैन’
हेटौँडाकी लोक गायिका अर्याल भन्छिन्–‘पारिवारिक सहयोग भयो भने गीत गाउन गाह्रो छैन’
२०७५ श्रावण ८,मंगलवार १४:२३
मकवानपुर ८ साउन । लोक–दोहोरी गायीका प्रतिमा अर्याल दाहाल आफ्नो चुलोचौको र गृहस्ती जिवनबाट समय निकालेर गीत गाईरहेककी छिन् । मकवानपर हेटौंडा नामक एल्बमको गीत उनको पहिलो रेकर्ड भएको गीत हो ।
लोक गाएक राजु बिरहीसंग डोएट गाएको उनको भिडियो रकर्ड भएपछि एकाएक उनी अहिले चर्चामा आईन । अहिलेसम्म १५ वटा एल्बममा स्वर दिइसकेकी छिन् उनले । यसै गीत संगितको सन्दर्भमा तु खबरका जी.न्यौपानेले उनीसंग गरेको कुराकानीको केहि अंस
प्रश्न : गायन पेशामा लोकदाहोरी बिधाको अवस्था कस्तो छ ?
उत्तर यो लोक सँस्कृती झल्काउने गाउँठाउँलाई गीत मार्फत गायन र दृश्य मार्फत झल्काउँने बिधा हो । र यो सरल बिधा भएकोले सबै उमेरकाले मन पराउँछन् । यसको माग पनि बढ्दो छ ।
प्रश्न : कसरी सिक्नु भो लोकदोहोरी गीत गाउँन ?
उत्तर मेरो बुवा पेशाले शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । मेलापात, जात्रामा साँगीतिक कार्यक्रम भनेपछि कहिल्यै छुटाउँनुहुन्नथ्यो । उहाँको मेला,जात्रामा गाउँने बाँनीको असर मलाईपनि परेको छ । उहाँले गीत गाएको हेर्दा, सुन्दा आफुलाई पनि गीत गाउँने रहर जागेर आउँथ्यो । घाँस दाउरा गर्दाखेरी लोकगीत गाउने गर्थेँ , मेरो प्रेरणाको स्रोत भनेकै बुवा हो ।
प्रश्न : कति बर्षको उमेरदेखि गीत गाउँन शुरु गर्नुभो ?
उत्तर ८/९ बर्षको उमेरदेखिनै गीत गाउँथेँ म ।
प्रश्न : लोकदोहोरी गीत गाउँदा राम्रो हु्न्छ भनेर कस्ले भन्यो त ?
उत्तर म सानै उमेरदेखि गीत गाउँथेँ । गाउँका मानिसहरुले पनि तिम्रो स्वर राम्रो छ लोकदोहोरी गीत गाउँदा हुन्छ भन्थे । हाम्रो घर (माईत) कैलाश गाउँपालिका पगनीमा पर्छ । लोक गाएक राजु बिरही दाई र हामी एकै ठाउँका हौं । उहाँले एकदिन एउटा गीत गाउ त भन्नुभयो, मैँले गीत गाएपछि उहाँले एल्बममा गीत गाउँने प्रश्ताव ल्याउनुभो । त्यसपछि मकवानपुर हेटौंडा भन्ने एल्बम निकालेर त्यसको म्यूजिक मिडियो पनि बनाईयो । त्यो मेरो पहिलो एल्बम हो । त्यहि भिडियो रेकर्डको गीतले मलाई प्रतिमाले पनि गीत गाउनेरहेछन् भनेर सबैको सामु चिनायो । र अहिले मलाई अरुले पनि गीत गाउनको लागि बोलाउने गरेका छन् ।
प्रश्न : कतिवटा एल्बममा स्वर दिनुभयो अहिलेसम्म ?
उत्तर १५ वटा अडियो गीतमा स्वर दिएको छु मैँले । भर्खरै पनि तिजको गीतमा आवाज दिएको छु छिट्टै बजारमा आउँदै छ ।
प्रश्न : कत्तीको सम्भव छ घरगृहस्ती भ्याएर गीत गाउन ?
उत्तर , मुस्कील छ । संघर्स गरेरै भएपनि अगाडी बढिरहेको छु । अहिलेसम्म त चलिराखेको छ । पछि के हुन्छ , कहाँसम्म पुगिन्छ थाहा छैन । म पहिलो प्राथमिकता परिवारलाई दिन्छु । त्यसपछि समय निकालेर गीत गाउँछु ।
प्रश्न : चुलो चौकोमै जिवन ब्यतीत गर्नुपर्छ भन्ने मानशिकताले ग्रस्त समाजमा छुट्टै विचार लिएर हिड्दा गाह्रो हुँदैन ?
उत्तर बुझ्ने मान्छेले नबुझीदिँदाचै गाह्रो हुन्छ । पारिवारीक सहयोग भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ । त्यति गाह्रो हुँदैन ।
प्रश्न : लोकदोहोरी बिधालाई अंगाल्दा के कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ ?
उत्तर एउटा कपी गर्ने कुराहरुबाट सचेत हुनुपर्छ । र अर्को कुरा अपाच्य दृश्य र शब्दहरुबाट टाढा रहनुपर्छ । आफ्नो कामसंग काम राख्यो भने राम्रो हुन्छ । हामीसंग गीतमा ब्यक्त गर्नुपर्ने डाँडाकाँढा पाखापर्वत, जातजाती, संस्कृती,घटना, उपघटनाहरु धेरै छन् । त्यसैलाई शब्दमा ढालेर संगीत भर्न सकियो भने सबैको प्यारो भईन्छ । म्यूजिक भिडियो हेर्दा, गीत सुन्दा परिवारमा सकिने वातावरण बनाउन सकियो भने मात्र राम्रो हुन्छ । बजारमा आएका गीत संगीत माया प्रितिमा मात्र सिमित भए । माया प्रितिलाई प्रश्तुत गर्नेपनि छुट्टै तरिकाहरु छन् । भावनामा डुवेर होईन यर्थाथपरक भयो भने असल हुन्छ ।
प्रश्न : कहिलेकाँही अभिनय पनि गर्नुपर्नेहुन्छ, भिडियो गर्दा, गित गाउनु र अभिनय गर्नु फरक होईन र ?
उत्तर, यो सबै आ–आफ्नो खुबीमा भर पर्दछ । काम गर्दै जाँदा अभिनय पनि आईहाल्छ । गीतको आशयलाई बुझियो भने त्यत्ति गाह्रो हुँदैन । तपाईले भन्नुभएको जस्तै अभिनय र गाएन धेरै फरक बिधा हो ।
प्रश्न : गायनलाई पेशा बनाउनु भएको चै कति भयो ?
उत्तर, ३/४ बर्ष भयो ।
प्रश्न नेपालमा चर्चामा आएका थुप्रै गायक, गायीकाहरु छन् त्यसमा तपाई पनि थपिनुभएको छ । डर लाग्दैन ?
उत्तर : हो नेपालमा चर्चित गायक गायीकाहरु थुप्रै छन् । म आफुलाई फरक सोच्दीन । निरन्तरतालेनै सबैलाई सफलता मिल्ने हो । त्यहि कुरालाई ध्यान दिएकी छु ।
प्रश्न : अन्त्यमा स्रोताहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
उत्तर, राम्रो गीत सुनिदिनुस् राम्रो गीतलाई मनपराईदिनुस्, मेरा गीतहरु पनि बजारमा आएका छन् । हेरीदिनुहोला, सुनिदिहुहोला, अनि प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला ।
समयका लागि धन्यवाद
मेरा कुरा तपाईको मिडिया मार्फत राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि मेरो तर्फबाट पनि धन्यबाद ।